Gentoo Linux Kernel Generic Shanduro Zvino Dzinowanikwa | Linux Vakapindwa muropa
Gentoo Linux Kernel Generic Shanduro Zvino Dziripo
Zvinotaridza kuti vakomana veGentoo havana kumira kushanda uye ndizvo zviri mumabhuku apfuura isu tinogovana newe chinyorwa pamusoro peiyo nyowani yakagadzikana vhezheni yePortage 3.0 umo kuvandudzwa kukuru kwakaitwa mukugadzirisa kwekuverenga, nekuti huwandu hwekufona kune use_reduce uye catpkgsplit mabasa akaderedzwa (kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo unogona kubvunza iyo chinyorwa mune inotevera chinongedzo).
Iye zvino mune mamwe manotsi azvino, iyo Vagadziri veGentoo vakazivisa kuwanikwa kwe generic Linux kernel inovaka yakagadzirwa neprojekti "Gentoo Kugovera KernelIzvi kuitira kurerutsa maitiro ekuchengetedza yeLinux kernel mukugovera kwevashandisi vazhinji.
Portage 3.0 kuburitswa kwakatsiga kwatove kuziviswa
Iyo purojekiti inopa kugona kuisa binary inovaka yakagadzirira kushandisa neiyo kernel uye shandisa yakabatana ebuild kuvaka, kugadzirisa uye kuisa iyo kernel uchishandisa package package, yakafanana nemamwe mapakeji.
Misiyano yakakosha pakati pesangano rinofungidzirwa-rekutanga kuvaka uye manyorerwo edzidziso yekernel ndiwo kukwanisa kugadzirisa zvoga paunenge uchiisa yakajairika masystem sisitimu pamwe nemaneja wepakeji (kubuda –update @world) uye yakatemerwa seti yesarudzo dzekumira iyo inovimbisa mashandiro mushure mekuvandudzwa (kana uchigadzira pachako, kana iyo kernel ikasatakura kana kukundikana, hazvisi pachena kana dambudziko iri riine chekuita nezvisiri marongero eparamende kana bhagi mune kernel pachayo).
Iyo Gentoo Distribution Kernel Project inofara kuzivisa kuti yedu nyowani Linux Kernel mapakeji akagadzirira vateereri vakawanda! Iyo purojekiti inovavarira kugadzira irinani Linux kernel yekuchengetedza ruzivo nekupa mabhiildi ayo anogona kushandiswa kumisikidza, kuumbiridza, uye nekuisa kernel zvachose kuburikidza nemaneja wepakeji, pamwe neakafananidzirwa eamberi tsanga. Isu tiri parizvino kutumira matatu kernel mapakeji.
Kuisa iyo Linux kernel, mapakeji matatu akaumbwa iyo inogona kuiswa pamwe nemamwe mapakeji esisitimu uye wozogadziridza iyo sisitimu yese pamwe neiyo kernel nemirairo imwe chete, pasina kuvaka imwe tsanga.
sys-kernel / gentoo-tsanga: iyo tsanga ine generic seti yeGentoo-yakatarwa genpatches. Kuumbwa kunoitwa uchishandisa maneja wepakeji uchishandisa marongero ekumisikidza kana nekumisikidza ako wega marongero.
sys-kernel / gentoo-kernel-bin: pre-yakavakwa binary kusangana kwe gentoo-kernel iyo inogona kushandiswa kukurumidza kuisa iyo kernel pasina kuinyora pane yako system.
sys-kernel / vanilla-tsanga: chivakwa chine vanilla Linux kernel, inowanikwa kubva kune kernel.org.
Uye iwe unofanirwa kurangarira kana kutaura (kune avo vasingashande naGentoo izvozvi) izvoue muGentoo, ndiye mushandisi anofanirwa kuumbiridza iyo kernel zvakasiyana iyo yese sisitimu kuburikidza neyekugadzirisa gadziriso.
Iyi nzira sekudaro inobvumidza kurongedza kwakanaka mashandiro, kubvisa zvisina kukodzera zvinhu panguva yekuungana uye kudzikisira nguva yekubatanidza uye saizi inouya yekernel.
Panguva imwe chete, nekuda kwekushayikwa kweiyo seti yakabatana seti yekusarudzika sarudzo, mushandisi anogona nyore kukanganisa paunenge uchigadzira uye ukasangana nekutakurika uye kusimudzira nyaya dzaive dzakaoma kuongorora.
Mese mapakeji anoisa iyo kernel sechikamu cheiyo package yekumisikidza maitiro, senge iyo yese system yako! Rumwe ruzivo rwunogona kuwanikwa muGentoo Handbook uye pane iyo yekuparadzira yeprojekti peji peji.
Como muenzaniso wedambudziko iyo inomuka kana ichishandiswa bhuku rekugadzirisa kweiyo kernel parameter inoitwa muGentoo, pane kushomeka kweyakaiswa seti yekusarudzika sarudzo izvo zvinoona kushanda mushure mekuvandudza (Kana yakagadziriswa nemaoko, kana iyo kernel ikasabhuroka kana tsaona ikaitika, hazvisi pachena kana dambudziko racho richikonzerwa nemarongero asiri eparamende kana bhagidhi muiyo kernel pachayo).
Iyo yetsika Gentoo nzira yekuwana kernel ndeyekuisa izvo zvinyorwa, uye wozozvigadzira wozvivaka iwe pachako. Kune avo vaisada kupfuura nenzira inonetesa yekumiseta nemaoko, imwe nzira yekushandisa genkernel yakapihwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Gentoo Linux Kernel Generic Shanduro Zvino Dziripo
Uye zvakare ... ivo vanoda kufambisa zvisingawanikwe, nei vasingataure chokwadi?
Chinangwa ndechekuisa kana kubvisa zvimwe zvingasarudzwa kubva pane yakasara kernel uye kuudza neophyte kuti isazvinetse kuti vabika chikafu zvakanaka ... izvo mushandisi achingoisa paibhibhi otora banga neforogo mumaoko avo.
Kwete vanhu, iyi haisi nzira yaunodzidza nayo, ndeye mushandisi uye yavo paranoia iyo inofanirwa kusarudza iyo .configure sarudzo ... chaizvo ndiko kuvimba nezvakaitwa nemumwe munhu, tiri kutadza neyakareruka yakaisirwa neshangu .
Firefox Tumira inovhara zvachose nekuti ivo havasati vaziva (kana kuda kugadzirisa) kugadzirisa kubiridzira kwavanga vachiita sevhisi
NVIDIA GeForce Iye zvino: ikozvino unogona zvakare kuishandisa pane Chromebook